Usomabhizinisi unikele ngomfaniswano | News24
Usomabhizinisi unikele ngomfaniswano
ISITHOMBE : SITHUNYELWEAbanye babafundi ababeyingxenye yohlelo lokuhlomula.
USOMABHIZINISI waseMgungundlovu uMnu Vusi Sibiya weSibiya Funeral Services ubuyise isithunzi kanye nokuzethemba kubafundi abaningi basezikoleni zaseMgungundlovu njengoba enikele ngemifaniswano yesikole emisha sha.
Le mifaniswano inikelwe kubafundi abantulayo abangaphezu kwama-800 abaphuma ezikoleni ezingama-49 ezingaphansi kwesiFunda saseMgungundlovu. Lemifaniswano inikelwe kubafundi ngokusemthethweni ngoLwesibili mhla zingama-29 kuMasingana (January) eCity Hall.
Ngokusho kukaNks Nqobile Kwitshana wakaSibiya Funeral Services uthe lolu uhlelo abalenza minyaka yonke kanti sekuneminyaka eyisithupha beluqhuba.
“Isifiso sikaMnu Sibiya ukuthi ufuna ukufundisa ukuthi ukuthi ukuze uphumelele kumele ube nesandla esiphayo. Lena ngenye yezindlela zakhe abonga ngayo kubona bonke abantu abamesekayo. Nakuba sihleli siyenza minyaka yonke lolu hlelo bekungokokuqala kulonyaka ukuba sizihlanganise zonke izikole ndawonye. Lolu kuzoba uhlelo oluqhubekayo njalo minyaka yonke ukwenza isiqiniseko sokuthi imiphakathi yethu iyasizakala,” kubeka yena.
Uqhube wathi lolu hlelo lwaqala ngonyaka owedlule ngenyaka kaLwezi nalapho bavakashela khona izikole base benxusa othisha ukuba batomule abafundi abali-15 isikole ngasinye abawudinga ngampela umfaniswano ukuze bezokwazi ukuthi bahlomule kulo hlelo.
“Othisha bebenikezwe umnqamulajuqu ukuthi mangabe kuqala lonyaka babe sebesinikezile uhlu lwabafundi abazohlomula. Amagama abafundi esiwatholile ngapahmbi kosukulomqamulajuqu ibona abakwazile ukuthi bahlomule. Sithanda ukubonga kakhulu nje kumakhasimende ethu ngokuseseka ngoba iwona awenza ukuthi nathi sibe namandla okuthi sikwazi ukuyisela emphakathini,” kuphetha yena.
Akugcinanga nje ngokuythi kuhlomule abafundi kuphela njengoba losomabhizini ephinde wanikela ngokudla ekhaya labadala Emseni ngalo uLwesibili.